Edito Taratra Archive | NewsMada | Page 2
Mailo sy mijery lavitra raha te ho avotra…
Par Taratra sur 17/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Manomboka misy ny filaharana eny amin’ny fivarotam-panafody etsy sy eroa amin’izao firongatry ny valanaretina Covid-19 izao indray. Efa misimisy ihany ny mividy fanafody fampitomboana ny hery fiarovan-tena. Tsy fantatra na tsy ampoizina be ihany izay mety ho fivoaran’ny valanaretina amin’izao andiany fahatelo izao? Aleo miambina sy mitandrina avy hatrany; eny, na misy aza ny tsy […]
Aza voany ihany aloha no atao izao
Par Taratra sur 16/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa azo lazaina ho milamina izao tontolo izao amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, na Delta, na Omicron? Mbola tena ao anatin’ny ady izao. Rehefa tena dinihina, mbola mafimafy sy sarotsarotra kokoa no ho ny teo aloha aza izany. Nahoana? Efa miditra amin’ny andiany fahadimy na fahenina izao ny firenen-dehibe sasany, firenena […]
Mba tsy ho faty ny fety…
Par Taratra sur 15/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Na ahoana na ahoana, mbola ao anatin’ny ady izao. Ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, Delta, Omicron. Tsy fantatra intsony? Tsy hita maso tsinona, tsy fantatra mazava, miovaova endrika be ihany… Amin’izany, tsy misy afa-tsy ny fiarovan-tena no fanafihana tsara indrindra, raha fiteny mandrakariva ny hoe ny fanafihana no fiarovan-tena tsara indrindra amin’ny ady. Mby […]
Fampandrosoana… tsy mandeha ila
Par Taratra sur 14/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Hopitaly manara-penitra, sekoly manara-penitra, tsena manara-penitra… Inona koa? Izay tratra ny fanorenana fotodrafitrasa etsy sy eroa amin’izao. Tsy misy distrika hadino? Ho hita eo… Ho fampandrosoana avokoa izany. Mitondra inona eo amin’ny fiainam-bahoaka? Na farafaharatsiny fihatsarana fari-piainana ahay na ankolaka na mivantana… Misy famoronana asa, ohatra? Na fanamorana ny vidim-piainana ahay… Inona izay fotodrafitrasa, raha […]
Mba fitsarana azo itokisana amin’izay…
Par Taratra sur 13/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Anisan’ny sehatra telo voalohany nahazoana fitarainana be indrindra amin’ny fanahiana na fisiana kolikoly ny tontolon’ny fitsarana, araka ny tatitry ny Bianco teny anivon’ny Antenimierampirenena farany. Efa misy ny ezaky ny minisiteran’ny Fitsarana amin’ny famarenana ny fahatokisana ny vahoaka ny fitsarana. Mby aiza? Tsy azo odiana tsy hita ary tsy takona afenina, mbola misy hatrany ny […]
Ny vahoaka aloha…
Par Taratra sur 11/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Nisy ny hetsika nokasain’ireo hoe mpiaro ny zon’ny mpanjifa, fa tsy neken’ny solontenam-panjakana sy ny fitandroana filaminana. Voalaza aza fa tsy entina hanakorontanana na misy aza ny fahasahiranana. Tsy lavina, misy tokoa ny fahasahiranana: tsy takona afenina, tsy azo odian-tsy hita. Eo ny tsy fandriampahalemana efa ho lava, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fahasahiranana amin’ny famatsian-drano […]
Zon’olombelona… ady fiady
Par Taratra sur 10/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
“Ny fanekena ny hasin’ny maha olombelona sy ny zony mitovy ary tsy azo tohintohinina dia anian’ny fototry ny fahafahana, ny rariny ary ny fandriampahalemana eran -tany.” Io no ambaran’ny savaranonando ao amin’ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny Zon’olombelona, tamin’ny 10 desambra 1948. Mby aiza? Iaraha-mahita sy mandre isan’andro amin’ny haino aman-jery mbamin’ny tambajotra-tserasera sosialy, ohatra, fa […]
Mila miombona amin’ny fahavalo iombonana
Par Taratra sur 09/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mbola am-perinady izao… Marolafy sy karazana ny ady? Ady amin’ny fahantrana, ady amin’ny tsy fandriampahalemana, ady amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, ady amin’ny kolikoly, ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro, ady amin’ny fahapotehan’ny tontolo iainana, ady amin’ny valanaretina toy ny Covid-19 amin’izao fotoana izao… Ady inona koa? Ady amin’ny fahalovana toy ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, ady amin’ny mpiasam-panjakana matoatoa, ady… Eny, […]
Tsy fahendrena ny mankahatra loza
Par Taratra sur 08/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Aorian’ny orana ny mety ho fiakaran’ny rano na tsia. Sarotra ny manombana sy mitsara ambony ihany ny toe-draharaha na toe-javatra mbola eo am-pihetsiketsehany na an-dalam-pivoarana. Aorian’ny ady no hahitana sy hahalalana izay mandresy na resy; eny, na izay faharavana sy fahavoazana noho ny ady. Tsy hafa amin’izany ve izao mbola fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky […]
Vahaolana… haingana sy maharitra
Par Taratra sur 07/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fahampian’ny rano sy ny ranonorana… Ireo no anisan’ny olana mampikaikaika ny vahoaka ifotony amin’izao. Mila vahaolana haingana sy maharitra. Tsy lavina, tena misy, ohatra, ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fampanjakana ny fandriampahalemana, saingy tsy hita be ihany. Tsy mbola mahazo antoka tanteraka amin’izay alehany sy ataony ny tsirairay: velom-panahiana lava, matahotra. […]
Tsy vitan’izay tsikera amin’izao…
Par Taratra sur 06/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Miiba na ambanin’ny zero ny isa azo omena na itsaran’ny solombavambahoaka sasany avy amin’ny mpanohitra ny asan’ny governemanta amin’izao, araka ny filazany azy. Tamin’ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena sy ny governemanta farany teo io. Mba marina? Samy manana ny fijeriny, fa ny itsitokotokoan’ny loha: samy manana ny heviny. Malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fitenenana, na misy aza […]
Fandriampahalemana… mila marin-toerana
Par Taratra sur 04/12/2021 Edito Taratra, NS Malagasy
Mihena ny tahan’ny tsy fandriampahalemana amin’izao, raha ny tatitry ny eo anivon’ny fitandroana filaminana. Ny vahoaka ifotony no mahita sy mitsara izay iainany isan’andro. Mba hitohy izay fandriampahalemana izay, fa tsy ho injainjay na tarehimarika fotsiny: mandroso mihemotra na, sanatria, mety hitombo aza ny asan-jiolahy amin’izao fiatrehana ny fetin’ny Krismasy ny faran’ny taona izao. Mampieritreritra, […]